Soo dejisan VLC 0.9.10 – Android – Vessoft
VLC – fudud ah si ay u isticmaalaan ciyaaryahanka in loo maqli karo files audio iyo video. Software wuxuu taageeraa qaabab multimedia badan oo loo maqli karo ee files waaweyn oo aan khasaaro ah oo tayo leh. VLC kuu ogolaanaya in aad u aragto video streaming ah, oo la shaqeeya subtitles oo ku kala soocaan files ee buugga by size ama magaca. VLC ku jira sida diirada badan oo la dhisay-in goolkii barbaraha iyo toban guuto si ay ula qabsadaan oo tayo leh loo maqli karo ee files warbaahinta. Sidoo kale VLC u saamaxaaya in ay soo bixi video files iyada oo ah shabakad Wi-Fi oo la shaqeeya daruur kaydinta DropBox ah.
Taageerada badan oo qaabab warbaahinta
Waxay abuurtaa maktabadda multimedia ah
Isbedel Quick of kuwan raadkaygay Cinwaan iyo codka
Tiro badan oo ah sida diirada dhisay-in